Meizu M6s: निर्दिष्टीकरण, मूल्य र सुरुवात पुष्टि भयो। चिनियाँ ब्रान्डबाट नयाँ मध्य-दायरा फोनको बारेमा थप फेला पार्नुहोस्।
डिजाईन र सम्भावित विनिर्देशहरू र Alcatel 3V को मूल्य
अल्काटेल V वी लास भेगासमा कन्ज्युमर इलेक्ट्रोनिक्स शो (२०१)) मा देखिएको थियो, यद्यपि यसको विशिष्टता र विशेषताहरु आधिकारिक बनाइएको थिएन, यसैले उनीहरूको बारेमा धेरै हल्लाहरू उत्पन्न भएको छ। हामी तपाईंलाई भन्छौं!
Huawei P स्मार्ट: निर्दिष्टीकरण, मूल्य र प्रक्षेपण पुष्टि भयो। यस मिड-रेंज फोनको बारेमा अधिक जान्नुहोस् जुन मार्केटमा दुई हप्तामा लाग्नेछ।
यस बर्षको पहिलो रातो समाचार, मोटोरोलामा कसैले खराब गरीएको छ र यस बर्षको लागि कम्पनीको सबै सम्भावित सूचीको लीक भयो।
Android TV Home आधिकारिक रूपमा Google Play मा आउँछ
Android TV Home अब Google Play मा उपलब्ध छ। यस संस्करणको बारे अधिक जान्नुहोस् जुन एन्ड्रोइड ओरियो लाई टेलिभिजनमा ल्याउन खोज्दछ।
एलजी सीईओले एलजी जी sc लाई बिरुवाबाट रीमेक गर्न भने छ
एलईजी सीईओ चाहान्छ कि एलजी जी sc लाई स्क्र्याचबाट रीमेक गर्न चाहन्छ। कम्पनीले हाल अनुभव गरिरहेका समस्याहरूको बारेमा बढि खोजी गर्नुहोस्।
सामसु Galaxy ग्यालेक्सी A8 (२०१)) स्पेनमा पहिले नै बिक्रीमा छ
सामसु Galaxy ग्यालेक्सी ए ((२०१)) पहिले नै स्पेनको टेलिफोन अपरेटर मोभिस्टार र भोडाफोनमा क्रमशः 8 2018eर 499 479.99। .XNUMXeयुरोमा बिक्रीको लागि उपलब्ध छ। हामी तपाईंलाई खबर विस्तार!
जडित मोडुलर :१: नयाँ ट्याग हेयर घडी
जडान गरिएको मोड्युलर :१: TAG Heuer ले सानो स्मार्टवाच प्रस्तुत गर्दछ। लोकप्रिय ब्रान्डबाट नयाँ स्मार्टवाचको बारेमा थप फेला पार्नुहोस्।
उत्तर कोरियाको एन्ड्रोइड एर्रि of १ 151१ भेट्नुहोस्
उत्तर कोरियामा उनीहरूको निरंकुशता र साम्यवादको बाबजुद पनि उनीहरूले स्मार्टफोनको रमाइलो गरे जस्तो हामी गर्छौं, यवेहरूसँग एर्रिrang १ 151१ छ, धेरै रमाइलो अनुप्रयोगहरू र पर्याप्त विनम्र र आधारभूत विवरणहरू सहितको एन्ड्रोइड मोबाइल, तर कार्यात्मक। हामी तपाईलाई प्रस्तुत गर्दछौं!
लास भेगासमा उपभोक्ता इलेक्ट्रोनिक्स शोमा घोषित फोनहरू, सोनी एक्सपेरिया एक्सए २, एक्सए २ अल्ट्रा र एल २ बेस्टबुईमा प्रिअर्डरको लागि उपलब्ध छन्, र आधिकारिक रूपमा फेब्रुअरी १ ​​2 मा सुरू गरिनेछ।
शाओमी रेडमी नोट A ए एक महिनामा १० लाख भन्दा बढी युनिटहरू बिक्री गर्दछ
शाओमी रेडमी नोट A ए एक महिनामा दस लाख भन्दा बढी एकाईहरू बिक्री गर्दछ। चिनियाँ ब्रान्डको कम-अन्तको बिक्रीको बारेमा थप फेला पार्नुहोस्
HMD आशा को अधिकार प्राप्त गर्दछ
एचएमडीले भर्खरै विगतमा माइक्रोसफ्टको स्वामित्वमा रहेको आशा श्रृंखलामा सबै नोकिया उत्पादनहरूको अधिकारहरू प्राप्त गर्यो। यो फिनिश कम्पनी यी निम्न-अन्त टोलीहरू मार्केटिंगको जिम्मामा हुनेछ। हामी तपाईंलाई भन्छौं!
HTC U11 EYEs: ताइवान फर्मको नयाँ मध्य-दायरा
HTC U11 EYEs: नयाँ मध्य-दायराको विशेष विवरण र छविहरू। ताइवान ब्रान्डको नयाँ मध्य-दायराको बारेमा अधिक जान्नुहोस् जुन यो सोमबार प्रस्तुत गरिएको छ।
म्याजे अल्फा र धूमकेतु गियरबेस्ट र ईबेमा बिक्रीमा छन्
मेजे अल्फा G जी र धूमकेतु क्रमशः गियरबेस्ट र ईबेमा बिक्रीमा छन्। यी मध्य-दायरा उपकरणहरू सीमित समयको लागि बिक्रीमा हुनेछ। को फाइदा लिनुहोस्!
नोकिया 8 ले DxOMark मा सबैभन्दा खराब स्कोरहरू मध्ये एक पाउँदछ
नोकिया's को क्यामेरा DxOMark मा खराब स्कोर। यस विश्लेषण र यो खराब स्कोरको उत्पत्तिको बारेमा अधिक खोजी गर्नुहोस्।
GB जीबी र्याम भेर्नी एक्स464 जीबी रोमको साथ Get १ ...199.99 for मा मात्र एलिप्रेसप्रेसमा पाउनुहोस्
भेरिने एक्स GB जीबी + GB4जीबीको एलिप्रेसमा एक अविश्वसनीय $ १ ...64 at को मूल्य छ। यस टर्मिनलको मध्य-दायराको विशिष्ट विशेषताहरू छन्, यद्यपि उत्कृष्ट सुविधाहरूसँग जुन तपाईंलाई पक्कै मनपर्नेछ।
Ibox X को अनबक्सिंग र पहिलो प्रभावहरू, १०० यूरो भन्दा बढीको लागि आईफोन एक्सको क्लोन
यहाँ म तपाईलाई Ibox X को अनबक्सिंग र पहिलो प्रभावहरू ल्याउँछु, १०० यूरो भन्दा बढीको लागि आईफोन X को अर्को क्लोन।
बत्तीको लाइटमा स्याओमी उत्पादनहरूमा छुटको मजा लिनुहोस्
बत्तीको लाइटमा स्याओमी उत्पादनहरूमा छुटको मजा लिनुहोस्। स्टोरमा प्रमुख एशियाई ब्रान्डहरूमा छुटको बारेमा थप फेला पार्नुहोस्।
HOMTOM: S12 सस्तो १:: smartphone स्मार्टफोन बजारमा
HOMTOM: S12 मार्केटमा १:: screen स्क्रीन भएको सस्तो स्मार्टफोन। यस फोनको बारेमा बढि खोजी गर्नुहोस् जुन यसको स्क्रिन र कम मूल्यको लागि बाहिर खडा हुन्छ।
अल्काटेल C सी: विशिष्टता र पहिलो लीक छविहरू
अल्काटेल C सी: विशिष्टता र आधिकारिक छवि लीक भयो। यस वर्ष आउने फ्रान्सेली ब्रान्डबाट नयाँ फोनको बारेमा अधिक खोज्नुहोस्।
वनप्लसले दोस्रो क्वाटरको अन्त्यमा आफ्नो नयाँ फोन प्रस्तुत गर्दछ
नयाँ वनप्लस फोन दोस्रो क्वाटरको अन्त्यमा आइपुग्नेछ। जूनमा आइपुग्ने चिनियाँ ब्रान्डबाट नयाँ फोनको बारे अधिक जान्नुहोस्।
काफागोमा $ १.10०.88.99 of को सट्टामा Black ... only only को लागि मात्र ब्ल्याकभ्यू A130.39 पाउनुहोस्!
ब्ल्याकभ्यू A10 काफागोमा अविश्वसनीय बिक्रीमा छ, र तपाईं यसलाई कूपन कोडको साथ यसको प्रारम्भिक मूल्यको $ १.88.99०.130.39 of को सट्टामा $ ...XNUMX for मा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। हामी तपाईंलाई विवरणहरू दिन्छौं!
ब्लकहरू: एन्ड्रोइडको साथ मोड्युलर स्मार्टवाच पहिले नै बिक्रीमा छ
ब्लकहरू: मोड्युलर Android स्मार्टवाच पहिले नै एक वास्तविकता हो। यस मोडेलको साथ एन्ड्रोइडमा आउनको लागि पहिलो मोड्युलर वाचको बारेमा थप फेला पार्नुहोस्।
Oukitel K10 अन्तिम निर्दिष्टीकरण
धेरै हप्ता अफवाह र प्रतीक्षा पछि, Okitel फर्म अन्ततः Oukitel K10000, 11.000 mAh ब्याट्री संग टर्मिनल को विशिष्टता, सुविधा र मूल्य जारी गरेको छ।
शाओमी र ओप्पोसँग आईफोन एक्सको अनुहार अनलक हुनेछ
शाओमी र ओप्पोसँग आईफोन एक्सको फेस आईडी हुनेछ। ती दुई कम्पनीहरूको निर्णयको बारेमा अधिक जान्नुहोस् जुन उनीहरूलाई यस प्रविधि प्रयोग गर्न अनुमति दिन्छ।
शाओमी मी5एस प्लस पाउनुहोस् $ २$१.१271.17 को सट्टामा Bang 399.99। .. Bang बंगगुडमा
जिओमु मी5एस प्लस बंगगुडमा %२% सम्म छुटको अतुलनीय प्रस्तावमा छ। तपाईं यसको मूल मूल्यको $ 32 को सट्टा मात्र 271.17 २399.99१.१XNUMX को लागि प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। हामी तपाईंलाई विवरणहरू दिन्छौं!
पुष्टि भयो: ग्यालक्सी एस S फेब्रुअरीमा प्रस्तुत गरिने छ
पुष्टि भयो: ग्यालक्सी S9 औपचारिक रूपमा फेब्रुअरीमा अनावरण हुनेछ। सामसु'sको उच्च-अन्तको प्रस्तुतीकरण मितिको बारेमा थप फेला पार्नुहोस्।
यी सीईएस २०१ at मा प्रस्तुत नयाँ एन्ड्रोइड वेयर वाचहरू हुन्
CES 2018: एन्ड्रोइड वेयरको साथ नयाँ घडीहरू भेट्नुहोस्। सीईएस २०१ un मा अनावरण गरिएका यी नयाँ स्मार्टवाचहरूका बारे थप जान्नुहोस्।
जापानी बहुराष्ट्रिय कम्पनी सोनी लस भेगासमा CES मा धेरै पछाडि थिएनन्। यस कress्ग्रेसमा हालसालका उत्पादनहरू देखाउँदा हामी चार नयाँ अविश्वसनीय हेडफोनहरू फेला पार्दछौं।
सामसु्गले नोभेम्बरमा आफ्नो लचिलो स्मार्टफोन उत्पादन सुरु गर्दछ
सामसुले नोभेम्बरमा लचिलो फोनको निर्माण सुरु गर्नेछ। कम्पनीको योजनाहरु लाई यसको लचकदार फोन संग अधिक जान्नुहोस्।
सामसु Galaxy ग्यालेक्सी On7 Prime चाँडै अमेजन भारतमा बिक्रीको लागि छ
सामसु Galaxy ग्यालेक्सी On7 Prime चाँडै नै अमेजन भारतमा बिक्रीको लागि उपलब्ध हुनेछ। यहाँबाट एन्ड्रोइड्सिस, हामीसँग सबै विवरण र स्पेसिफिकेशन्स छन् जुन यस टर्मिनलमा छ
अल्काटेल श्रृंखला १, and र:: नयाँ अल्काटेल मोडेलहरू CES २०१ at मा प्रस्तुत गरियो
CES 2018: अल्काटेलले नयाँ १,1,3 र series श्रृंखला प्रस्तुत गर्दछ। यस वर्ष आउने फ्रान्सेली ब्रान्डबाट फोनको नयाँ दायराका बारे अधिक जान्नुहोस्।
ग्यालक्सी जे २ प्रो (२०१ 2) आधिकारिक रूपमा सामसु Vietnam भियतनाम वेबसाइटमा देखा पर्दछ
केही हप्ता पहिले ग्यालक्सी J2 प्रो (२०१)) लीक भएपछि, आज यो आधिकारिक रूपमा भेन्टममा सामसु website वेबसाइटमा देखा पर्दछ, यसको सबै विवरणहरू जान्नुहोस्।
Android Oreo मा अपडेट Xiaomi Mi A1 मा विफलता को कारण
एन्ड्रोइड Oreo को साथ Xiaomi Mi A1 धेरै विफलता ग्रस्त। अद्यावधिक फोनमा भएका समस्याहरूको बारेमा बढि पत्ता लगाउनुहोस्।
लीगू २०१ C कार्निवालले हामीलाई गियरबेस्टमा तीन फोनमा छुट ल्याउँछ
लिगूले यसको तीन सबैभन्दा लोकप्रिय टर्मिनलहरू गियरबेस्टमा छुटमा राख्छ। यी लीगु KICAA MIX, T5 र T5C, तीन मिड-रेन्ज मोबाइलहरू छन् जुन तपाईंले याद गर्न सक्नुहुन्न।
Oukitel U18, आईफोन एक्स स्क्रीनबाट प्रेरित एशियाई फर्मको नयाँ स्मार्टफोन
एसियाली फर्मले आधिकारिक रूपमा आईओसी एक्सबाट प्रेरित स्मार्टफोन ओकिटेल यू १ presented प्रस्तुत गरेको छ र यसले हामीलाई पर्दाको माथि यस मोडलको चरित्र भौं प्रदान गर्दछ।
GearBest मा छुट छ GB जीबी र्याम MAZ अल्फा X प्राप्त गर्नुहोस्
गियरबेस्टमा GB जीबी र्याम र १२6 जीबी भण्डारण स्पेसको साथको मेज अल्फा एक्स उपलब्ध छ गियरबेस्टमा २०% छुटमा, यसलाई just २128। ..20 मा राखेर। हामी तपाईंलाई यस अस्वीकार्य अभियानको सबै विवरणहरू दिन्छौं!
OUKITEL K10 ११,००० mAh ब्याट्रीको साथ हामीलाई २१ घण्टाको अविरल भिडियो प्रदान गर्दछ
OUKITEL K10 एक टर्मिनल हो जसले हामीलाई ११,००० mAh ब्याट्री, एक ब्याट्री प्रदान गर्दछ जुन हामी स्ट्रिमिंग मार्फत भिडियोहरू प्ले गर्न सक्दछौं अधिकतम चमक र ध्वनीमा २१ घण्टा भन्दा बढीको लागि।
Huawei मेट 10 प्रो संयुक्त राज्य अमेरिका मा जनवरी9मा आउने छ
Huawei Huawei Mate 10 Pro, लास भेगासको सीईएसमा उपस्थित हुनेछ, फोन जुन आधिकारिक रूपमा यो मंगलबार, जनवरी9संयुक्त राज्य अमेरिका आइपुग्नेछ।
नोकिया 3310 4१० G जी विशिष्टताहरु पत्ता लाग्यो
नोकिया 3310 4१० G जी को पूर्ण विवरणहरु। उपकरणको नयाँ संस्करणको बारे अधिक जान्नुहोस् जुन चाँडै बजारमा आउँदैछ।
सामसु flex लचिलो प्रदर्शनमा नयाँ प्याटेन्ट
सामसु byद्वारा दर्ता गरिएको नयाँ प्याटेन्ट प्रेसर सम्वेदनशीलता टेक्नोलोजीसँग सुसज्जित लचिलो स्क्रीनहरू प्रशस्त बनाउँछ। हामीले उनीहरूलाई भेट्न कति समय पर्खनु पर्नेछ?
Meizu mBlu S6 TENAA मा देख्न सकिन्छ, यसको केही विशेषता र विशिष्टीकरण Xiaomi Redmi5सँग तुलना गर्न मिल्ने।
गुगल पिक्सेल २ र पिक्सेल २ एक्सएलको स्क्रीनमा इशाराहरूका साथ समस्याहरू
पिक्सेल २ र पिक्सेल २ एक्सएलको स्क्रीनका इशाराहरूले प्रयोगकर्ताहरूलाई समस्याहरू दिइरहेका छन्, के गल्तीहरू र उनीहरूको उत्पत्तिको बारेमा अधिक जान्नुहोस्।
G 600००० एमएएच ब्याट्रीको साथ मोबाइल, शक्तिशक्ति पावर अधिकतम P4500S भेट्नुहोस्
एनर्जेइजरले हामीलाई एक मध्यम range 4500०० एमएएच ब्याट्रीको साथ एक मध्यम दूरीको टर्मिनल तयार गरेको छ, यो पावर म्याक्स पी 600०० एस, एक मोबाइल हो जुन हामी यो महिना बजारमा देख्न सक्छौं। हामी तपाईंलाई उसको बारेमा सबै बताउँछौं!
नयाँ डाटाले सुझाव दिन्छ कि Xperia XZ1 प्रीमियम, Z1 Plus र XZ1s फोनले CES २०१ 2018 को बखतमा प्रकाश देख्दैनन्, यद्यपि त्यहाँ पहिले नै उनीहरूका विनिर्देशहरूको अफवाहहरू छन्।
सोनीले तीन टर्मिनलहरू तयार गरेका छन् जुन कम्पनीको मध्य दायरामा एकीकृत हुने छ, यो एक्सपेरिया एक्सए २, एक्सए २ अल्ट्रा, र एल २ हो, र यहाँ एन्ड्रोइड्सिसबाट हामीसँग यी स्मार्टफोनहरूको सबै फिल्टर गरिएको विवरणहरू छन्।
नोकिया already पहिले नै आधिकारिक छ, यसको विशिष्टताहरु जान्नुहोस्
नोकिया:: निर्दिष्टीकरण, मूल्य र प्रक्षेपण पुष्टि भयो। आज प्रस्तुत गरिएको फर्मको नयाँ मध्य-दायरा बारे थप जान्नुहोस्।
Aliexpress मा छुट छुट DQLEE BL12000 पाउनुहोस् !!
DoogEE BL12000, १२००mAh ब्याट्री सहित टर्मिनल, Aliexpress मा १%% छुट छ। तथ्यलाई फाइदा लिनुहोस् कि यो प्रस्ताव जनवरी until सम्म मात्र उपलब्ध हुनेछ। हामी तपाईंलाई विवरणहरू दिन्छौं!
OUKITEL K10: ११,००० mAh ब्याट्रीको साथ पहिलो स्मार्टफोन
OUKITEL K10: ११,००० mAh ब्याट्रीको साथ यो स्मार्टफोन भेट्नुहोस्। नयाँ OUKITEL स्मार्टफोनको बारे अधिक जान्नुहोस् जुन चाँडै मार्केटमा आइपर्नेछ।
Exynos 9810: ग्यालक्सी S9 को प्रोसेसर अब आधिकारिक हो
सामसुले एक्सीनोस 9180 १9.० को सबै विवरणहरू प्रकट गर्दछ। नयाँ स्यामसंग प्रोसेसरको बारेमा अधिक जानकारी पाउनुहोस् जुन ग्यालक्सी एस in मा जान्छ।
ओप्पोले यस गर्मीमा स्पेनमा मोबाइल फोन बेच्न शुरू गर्दछ
विपक्षले यस गर्मीमा आधिकारिक रूपमा फोन बेच्नेछ। स्पेन पुग्न कम्पनीको योजनाहरु बारे अधिक जान्नुहोस्।
LG Q6 Plus र Q6 Alfa स्पेनमा पहिले नै बिक्रीमा छन्
LG Q6 Plus र Q6 अल्फा स्पेनमा पहिले नै उपलब्ध छन्। LG बाट दुई नयाँ मध्य-दायरा फोनहरूको बारेमा थप फेला पार्नुहोस्।
सामसुले २०१ in मा 320२० मिलियन फोन बेच्ने आशा राखेको छ
सामसु believesको विश्वास छ कि उनीहरूले २०१ 320 मा 2018२० मिलियन स्मार्टफोन बेच्नेछन्। कोरियाली बहुराष्ट्रियको बिक्री पूर्वानुमानको बारेमा बढि जान्नुहोस्।
SHARP Aquos S3 पहिले नै ताइवान सर्टिफायर र नियामक NCC बाट प्रमाणीकरण प्राप्त गरिसक्यो। यो एक्कोस एस २ लाई सफल पार्न आउनेछ, र यहाँ एन्ड्रोइड्सिसबाट हामी तपाईंलाई यसको विशेषताहरू देखाउनेछौं।
एनएफसीको साथ Xiaomi मोबाइलहरूको सूची
सियाओमी उपकरणहरूको पूर्ण सूची पत्ता लगाउनुहोस् जुन हाल एनएफसी छ, प्रविधि धन्यवाद जुन मोबाइल भुक्तान गर्न सम्भव छ।
Huawei Enjoy 7S Huawei P स्मार्ट को रुपमा विश्वव्यापी रुपमा लॉन्च हुनेछ
Huawei P स्मार्ट: हुवावेको अन्तर्राष्ट्रिय नाम रमाईलो 7S। Huawei मोडेलको अन्तर्राष्ट्रिय सुरुवातको बारेमा थप फेला पार्नुहोस्।
HTC र मोटोरोलाले पुरानो ब्याट्रीको साथ मोबाईलको प्रदर्शनलाई ढिला गर्दैन
HTC र मोटोरोला भन्छन् कि उनीहरूले आफ्ना पुरानो फोनहरूलाई ढिला गर्दैनन्। एप्पल घोटाला पछि दुई कम्पनी को बयान को बारे मा अधिक खोज्नुहोस्।
सामसु Galaxy ग्यालेक्सी S9 र S9 + एफसीसी प्रमाणीकरण
सामसु Galaxy ग्यालेक्सी S9 र S9 + उनीहरूको प्रक्षेपणको लागि एक कदम अगाडि जान्छ, आज तिनीहरू एफसीसीबाट प्रमाणित छन्, हामी तपाईंलाई सबै विवरणहरू बताउँदछौं।
ZTE ब्लेड V9 १ 18: screen स्क्रीन र स्न्यापड्रैगन 9० को साथ आउँछ
ZTE ले १: screen स्क्रिनको साथ पहिलो स्मार्टफोन तयार गर्दैछ, र हामीसँग तपाईंको सबै सुविधाहरू र सुविधाहरू छन् तपाईंको लागि। हामी तपाईंलाई उसको बारेमा सबै बताउँछौं!
केही सामसु Galaxy ग्यालेक्सी नोट free स्थिर हुन्छ जब ब्याट्री सकियो
ग्यालक्सी नोट some केही मोडेलहरूमा ब्याट्री समस्याबाट ग्रस्त छ। फोनमा चार्ज नगर्ने ब्याट्रीको साथ समस्याहरूको बारेमा अधिक खोज्नुहोस्।
सामसु Mobile मोबाइल केयर, तपाईको सामसु smartphone स्मार्टफोनको लागि आधिकारिक बीमा
सामसु Mobile मोबाइल केयर, तपाईको नयाँ उच्च-अन्त सामसु Samsung स्मार्टफोन समावेश दुर्घटनाहरु कभर गर्न Allianz बाट आधिकारिक बीमा
हुवावेले २०१ 2018 मा सुरू गर्ने मोबाइलहरू पहिल्यै थाहा भइसकेका छन्। ब्रान्डले अर्को बर्ष सुरू गर्ने उपकरणहरूको बारेमा थप खोजी गर्नुहोस्।
एक LAGOO T5C पाउनुहोस् र $ over$ मा आफैंलाई बचत गर्नुहोस्!
एलएजीजीओ टी C सी २ of प्रतिशत छुटमा छ, हामीलाई 5। यूरोसम्म बचत गर्दै। यो सीमित समयको लागि Aliexpress मार्फत हो। पत्ता लगाउनू!
गुगल पिक्सेल २ का लागि सब भन्दा राम्रा चाल
गुगल पिक्सेल २ का लागि सात उत्तम ट्रिकहरू। गुगल पिक्सेल २ बाट अधिक प्राप्त गर्नका लागि आज उपलब्ध सर्वश्रेष्ठ ट्रिकहरू पत्ता लगाउनुहोस्।
DOOGEE BL7000 समीक्षा
हामीले DugEE BL 7000, smartphone०7060० mAh ब्याट्री भएको स्मार्टफोन र १ Samsung० यूरोको लागि सामसु fromबाट डुअल क्यामेरा विश्लेषण गzed्यौं। के यो चिनियाँ मोबाइल यसको लायक छ?
Choetech T520: कम भन्दा कम २० युरो को लागी एक गुणवत्ता वायरलेस चार्जर
Choetech T520: सस्तो र गुणवत्ता वायरलेस चार्जर। यस वायरलेस चार्जरको बारेमा अधिक पत्ता लगाउनुहोस् जुन यसको कम मूल्यको लागि बाहिर खडा छ।
हामी पहिले नै ग्यालक्सी J2 2018 का पूर्ण विवरणहरू जान्दछौं
ग्यालक्सी J2 2018: निर्दिष्टीकरण, मूल्य र रिलिज। सामसु'sको नयाँ मध्य-दायराको बारेमा छिट्टै मार्केटमा आउँनुहोस्।
नोकिया र Huawei संयुक्त रूपमा सहयोग गर्न एक पेटेंट सम्झौतामा पुगेको छ, शाओमी संग फिनिश फर्म को जस्तै एक सम्झौता
Honor9Lite अब आधिकारिक छ, यसको विशिष्टताहरू जान्नुहोस्!
सम्मान9लाइट: आधिकारिक विवरण, मूल्य र रिलिज। नयाँ Honor फोनको बारेमा चाँडै आउँदैछ।
त्यहाँ सियाओमी रेडमी नोट will हुनेछैन, रेडमी Plus प्लसले यसलाई प्रतिस्थापित गरेको छ
शाओमी रेडमी नोट and र नोट Plus प्लस बजारमा लॉन्च गरिने छैन। यस सम्बन्धमा कम्पनीको निर्णय को बारे मा अधिक जानकारी प्राप्त गर्नुहोस्।
Huawei P10 र P10 Plus ले Android Oreo प्राप्त गर्न सुरू गर्दछ
बजारमा पुग्न अन्तिम Huawei टर्मिनल, P10 दायरा, सुरुमा चीनमा एन्ड्रोइड Oreo प्राप्त गर्न शुरू भयो
Weimei हामी प्लस3विशिष्टताहरु प्रकट भयो
Weimei We Plus 3: विशिष्टता, मूल्य र आधिकारिक सुरुवात। स्पेनीको बजारमा यस उपकरणको आगमन बारे अधिक जान्नुहोस्।
DOOGEE X55: साइड फिंगरप्रिन्ट रिडरको साथ विश्वको पहिलो पूर्ण दृश्य स्मार्टफोन
Doogee हामीलाई पहिलो र मात्र फुलभ्यू फोन साइडमा औंठाछाप पाठकको साथ ल्याउँदछ। यो Dooge X55, पूर्ण स्क्रीनको साथ टर्मिनल हो।
Gearbest मा स्मार्टफोन र phablets मा सम्झौता को लाभ उठाउनुहोस्
Gearbest मा स्मार्टफोन र प्रविधि मा छुट। लोकप्रिय स्टोरले हामीलाई विशेष रूपमा ल्याउने छुटका बारे थप जानकारी लिनुहोस्।
नोकिया एफसीसी मार्फत जान्छ, हामी तपाईंलाई विशिष्टताहरू देखाउँदछौं
बहुप्रतीक्षित नोकिया officially आधिकारिक रूपमा अनावरण हुने छ। जब यो प्रस्तुत भइरहेको छ, यो पहिले नै FCC मार्फत पार गरिसक्यो र स्पेसिफिकेसन लीक भयो।
अर्को ग्यालक्सी S9 + को पहिलो बेन्चमार्क फिल्टर गरिएको छ
गीकबेन्चका केटाहरूले आफ्नो वेबसाइटमा सामसु Galaxy ग्यालेक्सी एस + + को पहिलो बेन्चमार्क पोस्ट गरे, टर्मिनल जुन फेब्रुअरीको अन्त्यमा प्रस्तुत हुनेछ
एक अविश्वसनीय मूल्य मा Vernee एक्स प्राप्त गर्नुहोस्!
भेर्नी एक्स, P23 हेलियोको साथ पहिलो पूर्ण दृश्य फोन, गियरबेस्टमा बिक्रीमा छ। यो मोबाईल प्राप्त गर्न तपाईको लागि अविश्वसनीय अवसर!
यो युलेफोन पावर, हो, ठूलो स्वायत्तता सहितको फोन
Ulefone ले एलेफोन पावर pre प्रस्तुत गर्दछ, एक मध्य-दायरा टर्मिनलको साथ ,,०m० mAh ब्याट्री जसले राम्रो स्वायत्तता समय सुनिश्चित गर्दछ।
नयाँ छुट गर्नुहोस् M9 अब विशेष छुटको साथ
यो नयाँ लेगू M9 प्राप्त गर्ने समय हो, less camera less० भन्दा कममा बोर्डरलेस स्क्रिनको साथ चार क्यामेरा फोन
ग्यालेक्सी नोट for का लागि यस क्रिसमसमा सामसु and र यसको ठूलो छुट
सामसु Galaxy ग्यालेक्सी नोट Gold गोल्ड, यसको डुअल सिम संस्करणमा, आधिकारिक सामसु store स्टोरबाट २8० यूरो छुट छ, यो सबै सीमित समयको लागि।
नुबिया Z17S आधिकारिक रूपमा स्पेन आइपुग्छ
Nubia Z17S यस शुक्रवार स्पेनमा बिक्रीमा जान्छ। स्पेनीमा आएको चिनियाँ ब्रान्डको उच्च-अन्तको बारेमा थप फेला पार्नुहोस्।
सामसुले ग्यालक्सी A8 र A8 +, सुविधाहरू र विशेष विवरणहरूको सुरूवात घोषणा गर्‍यो
कोरियाली कम्पनी सामसुले भर्खर आधिकारिक रूपमा नयाँ ए-रेंज टर्मिनल, A8 र A8 +, मध्य-दायरा टर्मिनल प्रस्तुत गरेको छ।
नोकिया सबैभन्दा प्रख्यात धीरजको परीक्षाबाट गुज्रिरहेको छ, के यो सफल हुन्छ?
नोकिया ले जेरीRigE Everything धीरज परीक्षण पार गर्दछ। प्रख्यात नोकिया फोन परीक्षणको बारेमा बढि फेला पार्नुहोस्।
स्यामसंग ग्यालेक्सी एस Plus प्लसको सर्वश्रेष्ठ क्लोन Meiigoo S8 को गहन भिडियो समीक्षा
Meiigoo S8 को पूर्ण र विस्तृत गहन भिडियो समीक्षा, जुन मेरो लागि सामसु Galaxy ग्यालेक्सी एस Plus प्लसको सर्वश्रेष्ठ क्लोन हो।
एम-हॉर्स शुद्ध १ विश्लेषण
एम-हॉर्स शुद्ध १ को विश्लेषण, 1..5,7 "स्क्रीनको साथ सस्तो स्मार्टफोन र १०० भन्दा कम युरोको लागि सोनी डुअल क्यामेरा, के यसको लायक छ?
OUKITEL K6, मिड-रेन्जको ईर्ष्या
OUKITEL K6 पत्ता लगाउनुहोस्, फर्मको नयाँ प्रतिबद्धता सबैभन्दा शक्तिशाली स्मार्टफोनहरू मध्ये एक, screen "स्क्रिन र Helio P6 चिप
Huawei Enjoy 7S अब आधिकारिक छ: यसको विशिष्टताहरू जान्नुहोस्
Huawei7मजा लिनुहोस्: निर्दिष्टीकरण, मूल्य र आधिकारिक सुरुवात। नयाँ Huawei उपकरण र यसको विनिर्देशको बारेमा बढि खोजी गर्नुहोस्।
बहुराष्ट्रिय सोनीलाई हालका बर्षहरूमा चित्रित गरिएको छ, खासगरि ...
ब्ल्याकबेरी प्रिभले यसको सुरू भएको दुई बर्ष पछि अपडेटहरू प्राप्त गर्न रोक्दछ
यसको सुरू भएको दुई बर्ष पछि र ब्ल्याकबेरीले प्रतिज्ञा गरे अनुसार, प्रिभ मोडेलले सुरक्षा अद्यावधिकहरू प्राप्त गर्न रोक्न सुरु गर्यो
यहाँ भर्खरका स्टार वार्स फिल्मका धेरै वालपेपरहरू छन्: एपिसोड VIII अन्तिम जेडी
रेजर फोन स्पेनमा पहिले नै बिक्रीमा छ
Razer स्पेन मा Razer फोन बिक्री मा राख्छ। स्पेनीको बजारमा Razer उपकरणको आगमनको बारे अधिक जान्नुहोस्।
सैमसंग ग्यालेक्सी A8 २०१ 2018 के हुने भन्नेका विभिन्न रेन्डरहरू फुटेका छन्
धेरै रेन्डरहरू भर्खरै अर्को सालमा उपलब्ध हुने अर्को सामसु Galaxy ग्यालेक्सी ए be के हुन्छ भनेर लीक भएको छ। हामी तपाईलाई तस्वीरहरू देखाउँदछौं!
नयाँ तस्बिरहरू, अब भिडियोमा कसरी ग्यालेक्सी S9 र S9 Plus हुन सक्छ
हामी ग्यालक्सी एस of को छविहरूको साथ जारी राख्छौं, तर यस पटक हामी तपाईंलाई दुबै मोडेलको ग्यालेक्सी एस and र ग्यालक्सी एस Plus प्लसको रेन्डरको भिडियो देखाउँदछौं।
Vernee X, एक एन्ड्रोइड स्मार्टफोन जसले हल्ला गर्नेछ
नयाँ भेर्नी एक्स,6इन्च स्क्रिनको एक स्मार्टफोन, GB जीबी र्याम, नयाँ मिडियाटेक हेलियो पी २ ch चिप र अधिक धेरै भेट्नुहोस्
Meiigoo S8 सस्ता अन्तर्राष्ट्रिय सस्ता !!
भाग्नुहोस् र यस Meiigoo S8 को लागि सस्तामा भाग लिनुहोस्, सामसु Galaxy ग्यालेक्सी S8 प्लसको सर्वश्रेष्ठ क्लोन जुन क्रिसमसको दिनमा तपाईंको घरमा जान सक्छ।
अमेजनले स्मार्टफोन र स्मार्टवाचहरूमा सीमित समयको लागि हामीलाई अविश्वसनीय छुट र छूटहरू ल्याउँछ। के तपाई उनीहरूलाई जान्न चाहानुहुन्छ?
यस शीर्ष १० मोबाइल फोनहरू पत्ता लगाउनुहोस् २०१ 10 को सबैभन्दा उत्कृष्ट फोनहरूको चयनको साथ जुन यस बजारमा हिट भयो।
अर्को Huawei टर्मिनल को नयाँ विवरण र सुविधाहरु फिल्टर गरीएको छ। यो Huawei P11, एक उच्च-अन्त हो जुन अविश्वसनीय विशेष विवरणहरूको साथ आउँनेछ।
Vernee सक्रिय मा at 40 छुट पाउनुहोस्
Aliexpress मा Vernee सक्रिय मा $ 40 छुटको फाइदा लिनुहोस्। यस फोनमा भएको ठूलो छुटको बारेमा बढि जान्नुहोस्।
केही दिनको लागि उपलब्ध स्मार्टफोनमा इरसिस्टेबल अफरहरू
यहाँ हामी तपाईंलाई स्मार्ट छूट मूल्यमा आजका लागि स्मार्टफोनमा अपूरणीय प्रस्तावहरूको उत्तम चयन छोड्न सक्छौं।
यदि तपाइँ यस क्रिसमसमा तपाइँको पुरानो ट्याब्लेट नविकरण गर्ने योजनामा ​​हुनुहुन्छ भने, यस लेखमा हामी तपाइँलाई एन्ड्रोइडद्वारा ब्यवस्थित ਪਲको उत्तम ट्याबलेटहरू देखाउँदछौं
लाइट इन बक्समा स्मार्टफोनहरूमा छुटहरूको फाइदा लिनुहोस्
स्मार्टफोनमा यी छुटहरू लाईट इन बक्समा लिनुहोस्। यी दुकानहरू र लोकप्रिय पसलले ल्याउने बारेमा अधिक खोज्नुहोस्।
नयाँ Huawei Enjoy 7S का स्पेसिफिकेशन्स फिल्टर गरिएका छन्
सामान्य को रूप मा, अन्तिम टर्मिनल कि यसको प्रस्तुतीकरण अघि यसको विशिष्टता फिल्टर गरिएको देखेको छ Huawei Enjoy 7S
सामसुले ग्यालक्सी नोट for का लागि नयाँ मर्मत अपडेट अपडेट गर्दछ
सामसुले भर्खरै युरोपमा सुरू गर्यो, नयाँ मर्मतसम्भार अपडेट जसमा परिचालन समस्याहरू समाधान गरिन्छ र अन्य कार्यहरू सुधार गरिन्छ
Gearbest क्रिसमस पदोन्नति मा 70% को छुट
गियरबेस्ट क्रिसमस अभियान: 70०% सम्म छुट। क्रिसमस अभियानको बारेमा बढि फेला पार्नुहोस् जुन अब गियरबेस्टमा सुरु हुन्छ।
Oukitel K10, ११,००० mAh ब्याट्रीको साथ एक स्मार्टफोन जुन एक हप्तासम्म रहन्छ
Oukitel अर्को वर्षको सुरूमा K10 बिक्रीमा राख्नेछ, ११,००० mAh ब्याट्रीको टर्मिनल, जसको साथ यसलाई एक हप्तामा चार्ज गर्न आवश्यक छैन।
Xiaomi Mi7र Mi7Plus को विशेष विवरणहरू र प्रस्तुतीकरण मिति फिल्टर गरियो
Xiaomi Mi7र Mi7Plus: विशिष्टता र प्रस्तुतीकरण मिति लीक भयो। ब्रान्डको उच्च-अन्तका फोनहरूको बारेमा थप फेला पार्नुहोस्।
साधारण व्यावहारिक भिडियो ट्यूटोरियल जसमा म तपाईंलाई शियोमी एमआई A1 मा एफओ रेडियो कसरी सक्रिय गर्ने बारेमा देखाउँछु रूट बिना र आधिकारिक वारेन्टी गुमाए बिना।
शाओमी मी ए 1 को फाइदा लिनको लागि उत्तम चालहरू। सर्वश्रेष्ठ ट्रिकहरू पत्ता लगाउनुहोस् जसले हामीलाई शाओमी उपकरणबाट अधिक प्राप्त गर्न अनुमति दिन्छ।
गुगलले स्मार्टवाचहरू निश्चित गर्दछ जुन एन्ड्रोइड ओरियोमा अपडेट हुनेछ
एन्ड्रोइड Oreo मा अपडेट भएका स्मार्टवाचहरूको पूर्ण सूची। अद्यावधिक हुने मोडेलहरूको साथ गुगलले खुलासा गरेको सूची पत्ता लगाउनुहोस्।
यो लेखमा हामी तपाइँलाई हामी कसरी Huawei मेट 10 प्रो बाट आएका सबै वालपेपर डाउनलोड गर्न सक्छौं देखाउन
OnePlus 5T बाट अधिक प्राप्त गर्न उत्तम तरिकाहरू। यी ट्रिकहरू पत्ता लगाउनुहोस् जसले तपाईंलाई वनप्लस T टीबाट अधिक लाभ लिन मद्दत गर्दछ।
मोटोरोला पनि स्टार वार्स ज्वरोमा सामेल भएको छ र स्टार वार्स जारी गर्नेछ: मोटो जेडको लागि लास्ट जेडी मोटो मोड, यद्यपि अहिले केवल चीनमा
नयाँ LAGOO 7Tc खरीद गर्न5कारणहरू
हामी तपाइँलाई reasons कारणहरू देखाउँदछन् किन लीगू टी c सी एक धेरै रोचक विकल्प हो जुन हाम्रो स्मार्टफोनको नवीकरण गर्दा खातामा लिइन्छ।
Android Oreo Android Wear2को साथ घडीहरूमा आउँदछ
Android Wear 2.0 Android Oreo मा अद्यावधिक हेर्छ। नयाँ संस्करणमा स्मार्टवाचहरू अपडेट गर्ने बारेमा बढि फेला पार्नुहोस्।
GB२ जीबी शाओमी मी ए १ आधिकारिक रूपमा स्पेन आइपुग्छ
शाओमी मी ए 32 को GB२ जीबी संस्करण स्पेनमा आइपुग्छ। Xiaomi उपकरणको यो नयाँ संस्करणको सुरुवातको बारेमा थप फेला पार्नुहोस्।
Meiigoo S8, अनबक्सिंग र सामसु Galaxy ग्यालेक्सी S8 प्लसको सर्वश्रेष्ठ क्लोनको पहिलो प्रभावहरू
Meiigoo S8 मेरो लागि एक डिजाईन र गुणवत्ता समाप्त, शानदार स्क्रिन र पागल मूल्यको साथ सामसु Galaxy ग्यालक्सी S8 Plus को सर्वश्रेष्ठ क्लोन हो। € १ than० भन्दा कममा तपाईसँग GB जीबीको र्याम, GB 150 जीबी रोम र एन्ड्रोइड .4.० छ, एक संयोजन जसले यो मेईगु एस of को खरीददारहरूलाई संतुष्ट पार्दछ।
सामसु Galaxy ग्यालेक्सी S9 लास भेगासमा CES मा प्रकाश देख्दिन
अन्तमा, यस्तो लाग्छ कि यो पुष्टि भयो कि सामसु Galaxyको ग्यालक्सी एस9ले आधिकारिक रूपमा दिनको उज्यालो देख्नेछैन जबसम्म बार्सिलोनामा आयोजित MWC २०१ held सम्म।
उपभोक्ता रिपोर्टका अनुसार ग्यालक्सी S8 आईफोन X भन्दा धेरै राम्रो छ
उपभोक्ता रिपोर्ट बडीका अनुसार ग्यालेक्सी एस Apple एप्पलको आईफोन एक्स भन्दा खरीदका लागि सिफारिश गरिएको स्मार्टफोन हो, बिभिन्न कारणका लागि जुन हामी तपाईंलाई बुझाइरहेका छौं।
टमटपमा सर्वश्रेष्ठ टेक बार्गेनहरू
टमटपमा उत्तम टेक्नोलोजी बार्गेनहरूको फाइदा लिनुहोस्। टमटपमा यी प्राविधिक उत्पादन प्रमोशनहरूको बारेमा थप फेला पार्नुहोस्।
Huawei Nova 2S आधिकारिक विशिष्टताहरु पत्ता लाग्यो
Huawei Nova 2S को पूर्ण विवरणहरु को बारे मा जान्नुहोस्। चिनियाँ ब्रान्डको नयाँ phablet को बारे मा अधिक जानकारी पाउनुहोला जुन मार्केटमा छिट्टै हिड्नेछ।
जस्तो तपाईले अपेक्षा गर्नुहुनेछ, यूरोपियन अदालतले पुष्टि गर्यो कि शियोमी ट्याब्लेट "मी प्याड" ले त्यो नाम प्रयोग गर्न सक्दैन जब यो यूरोपमा बेचिन्छ।
ग्यालक्सी A5 र A7 2018 नाम परिवर्तन गैलेक्सी A8 र A8 + हुनेछ
सबै कुरा स indicate्केत गर्दछ कि ग्यालक्सी A5 र A7 2018 दायरा A8 र A8 + अर्को नाम परिवर्तन हुनेछ
लाइट इन बक्समा स्मार्टफोन र मेमोरी कार्डहरूमा छुटको फाइदा लिनुहोस्
Xiaomi स्मार्टफोन्स र बक्स मेमोरी कार्डमा लाइट प्रस्ताव गर्दछ। लोकप्रिय स्टोरले हामीलाई ल्याउने छुटहरूको बारेमा थप फेला पार्नुहोस्।
Honor 7X आधिकारिक रूपमा स्पेन आइपुग्छ
Honor 7X: विशिष्टता, मूल्य र उपलब्धता। नयाँ Honor मध्य दायरा को बारे मा अधिक जानकारी खोज्नुहोस् अब स्पेनमा।
अर्को शाओमी मी7स्नैपड्रैगन 845 प्रोसेसर प्रयोग गर्दछ
जे होस् सामसु Galaxy ग्यालेक्सी एस स्नापड्रैगन carry9 carry बोक्ने पहिलो उपकरण हुने अपेक्षा गरिएको थियो, आज शाओमी आश्चर्यचकित हुन्छ र विजेताको घोषणा गर्दछ।
Oukitel वर्षको अन्त्य हुनु अघि OUKITEL K6 सुरूवात गर्दछ, यसको चश्मा जान्नुहोस्!
OUKITEL K6: निर्दिष्टीकरण, मूल्य र सुरुवात। ब्रान्डको नयाँ स्मार्टफोनको बारेमा बढि फेला पार्नुहोस् जुन यस क्रिसमसमा सुरूवात हुनेछ।
सामसु Galaxy ग्यालेक्सी S9 मार्केटमा 512१२ जीबीको भण्डारणको साथ हिट गर्न सक्दछ
सामसु'sको ग्यालेक्सी एस to सँग सम्बन्धित पछिल्लो अफवाहले दाबी गर्‍यो कि अर्को सामसु flag फ्ल्यागशिप the१२ जीबी हुन सक्ने अधिकतम क्षमता
वनप्लस T टी मा ब्याg्गगूडमा विशेष छुट। OnePlus 5T मा डिसेम्बर until सम्म उपलब्ध यो अनन्य छुटको बारेमा बढि पत्ता लगाउनुहोस्।
शाओमी रेडमी and र रेडमी Plus प्लसको पहिलो आधिकारिक छविहरू
शाओमी रेडमी and र रेडमी Plus प्लस: पहिलो आधिकारिक छविहरू। दुई नयाँ शाओमी फोनहरूको पहिलो आधिकारिक छविहरू पत्ता लगाउनुहोस्।
उत्तम मूल्यमा पदोन्नतिमा अविश्वसनीय LEAGOO T5c पाउनुहोस्
यो विशेष पदोन्नतिको साथ उत्कृष्ट लेगू T5c एक अविश्वसनीय मूल्यमा प्राप्त गर्नुहोस्, तपाईं डिसेम्बर १० सम्ममा यसलाई उम्कन दिनुहुन्न।
योइगोले डिसेम्बरको यस महिनाको लागि हामीलाई सामसु Galaxy ग्यालेक्सी एस offers मा प्रदान गर्दछ, top००-यूरो छुटको साथ टर्मिनल टर्मिनल।
OUKITEL MIX २ पाउनुहोस् केवल $ ...2। को लागि
OUKITEL MIX2सीमित समयको लागि। 99,99 को लागि उपलब्ध छ। एक विशेष मूल्यमा उपलब्ध यस उपकरण पदोन्नति को बारे मा अधिक खोज्नुहोस्।
Vernee सक्रिय: ब्रान्डको पहिलो एन्टि-शक स्मार्टफोन
Vernee सक्रिय: असहाय, स्टाइलिश डिजाइन फोन अब उपलब्ध छ। Vernee सक्रिय, ब्रान्डको नयाँ एन्टि-शक फोनको बारेमा अधिक खोज्नुहोस्।
योयोगोको साथ नि: शुल्क स्यामसंग ग्यालेक्सी J5 कसरी पाउने
योईगोले यस डिसेम्बरको महिनाको लागि हामीलाई प्रस्ताव गर्दछ जुन ग्यालेक्सी जे5२०१ 2017 लाई पूर्ण निःशुल्क सित्तैमा प्रदान गर्दछ जुन मासिक कुनै पनि युरो तिर्ने छैन।
सामसु Galaxy ग्यालेक्सी जे Prime प्राइमको पहिलो विशिष्टताहरू फिल्टर गरियो
सामसु Galaxy ग्यालेक्सी J5 प्राइम: पहिलो स्पेसिफिकेशन्स लीक भयो। नयाँ सामसु phone फोनको पहिलो विशिष्टताहरू भेट्नुहोस्।
वनप्लस T टी स्टार वार्स संस्करण प्रकाशित भयो
वनप्लस T टी स्टार वार्स संस्करण प्रकाशित भयो। चीनियाँ ब्रान्डको उच्च-अन्तको यस संस्करणको बारेमा अधिक जान्नुहोस् जुन डिसेम्बर १ on मा सुरू हुन्छ।
स्वारोवस्की स्मार्टटर्ल लिमिटेड संस्करण, ग्यालक्सी एस + + स्पेनको बिक्रीका लागि विशेष रूपमा स्वरोस्की क्रिस्टलको एक्स्क्लुभ केसको साथ।
कोरियाली कम्पनी सामसुले ग्यालेक्सी एस + + सँगको संयोजनमा एउटा विशेष केस सुरु गरेको छ जुन स्पेनमा मात्र उपलब्ध छ
सामसु G गियर स्पोर्ट स्पेनमा पहिले नै बिक्रीमा छ। नयाँ सामसु sports खेल वाच बारे स्पेनिश बजारमा अब उपलब्ध छन्
Huawei Nova 2S का पहिलो छविहरू र सुविधाहरू फिल्टर गरिएका छन्
प्रसिद्ध Huawei Nova श्रृंखला अर्को नयाँ सदस्य अपनाउन लागिरहेको छ: Huawei Nova 2S, एक उच्च-मोबाइल मोबाईल जसले एक शक्तिशाली टर्मिनल हुने वचन दिन्छ।
हामी bluboo S8 विश्लेषण गर्छौं, एक धेरै राम्रो प्रदर्शनको साथ एक मध्य-सीमा टर्मिनल
ब्लूबु फर्मले हामीलाई एस model मोडल प्रदान गर्दछ, टर्मिनल कुनै पनि उपयोगकर्ताको दिन प्रति दिनको लागि एकदम उल्लेखनीय फाइदाहरूको साथ मूल्यमा समायोजित हुन्छ।
सबैभन्दा कठिन अवस्थाको लागि Razer फोन धीरज परीक्षण
बजारमा नयाँ टर्मिनलको आगमनको साथ, मुख्य YouTube च्यानलहरू भिडियोहरूमा भरिन्छ ...
ओप्पो एफ Youth युवा: ओप्पो एफ The को कम शक्तिशाली संस्करण अब आधिकारिक छ
स्मार्टफोन निर्माता ओप्पोले हामीलाई नयाँ टर्मिनल प्रस्तुत गर्दछ जुन छिट्टै नै जारी हुनेछ। यो ओप्पो एफ Youth युवा हो, एक मध्य-दायरा।
लिघुले हामीलाई एस 8 प्रदान गर्दछ, टर्मिनल १०० भन्दा बढी यूरोको लागि र यसले हामीलाई धेरै उचित मूल्यमा धेरै रोचक सुविधाहरू प्रदान गर्दछ।
वनप्लस T टी लाभा रेडमा घोषित गरियो। यस नयाँ लाभा रातो र inमा वनप्लस T टीको नयाँ संस्करणको बारेमा थप फेला पार्नुहोस्।
ग्यालक्सी S8 दायराले नयाँ रंग प्राप्त गर्दछ: बरगंडी रातो
ग्यालेक्सी एस range दायरामा यो उपलब्ध भएको दायरा पूर्ण गर्न नयाँ रंग प्राप्त भयो। हामी बरगंडी रातोको बारेमा कुरा गर्दैछौं।
Honor V10 अब आधिकारिक छ: यसको विशिष्टताहरू जान्नुहोस्
Honor V10 को प्रस्तुतीकरणको बारेमा थप फेला पार्नुहोस्, चीनमा फर्मको नयाँ उच्च-अन्त। उपकरणको बारेमा सबै कुरा पहिले नै ज्ञात छ।
OnePlus6को वैचारिक डिजाइन भिडियोमा देखा पर्दछ
यद्यपि वनप्लस T टीले भर्खरै बजारमा असर पारेको छ, वनप्लस ले अवधारणा डिजाइनको उपस्थितिको लागि हेडलाइटहरू बनाउन सुरू गर्यो।
OUKITEL MIX2Gearbest मा मात्र $ २२। .229,99 Get मा पाउनुहोस्
OUKITEL MIX 2: Gearbest मा विशिष्टता र प्रस्ताव। नयाँ OUKITEL फोनको बारेमा बढि पत्ता लगाउनुहोस् अब रिजर्व गर्न उपलब्ध छ।
साइबर सोमबार २०१ 2017 छुटहरूको फाइदा लिनुहोस् लाईट इन बक्समा
साइबर सोमबार २०१ 2017 छुटहरूको फाइदा लिनुहोस् लाईट इन बक्समा। यी महान साइबर सोमबार छुटहरूमा नछुटाउनुहोस्।
प्रमुख क्यामेरा र प्रदर्शन सुधारहरू प्राप्त गर्न Razer फोन
रेज़र फोनले क्यामेरामा गुणस्तरको अविश्वसनीय अभावको साथ बजारमा हिट गर्‍यो, निर्माताले समस्याको समाधान छिट्टै नै मिलाउने छ।
Oukitel C8 एक Android 7.0 सस्तो Android को समीक्षा गर्नुहोस् जसले मलाई चकित पारेको छ
यहाँ म तपाइँलाई Oukitel C8 को पूर्ण भिडियो समीक्षा छोड्दछु, एक प्रयोगकर्ताको लागि एन्ड्रोइड प्रविष्टि-स्तर टर्मिनलको खोजीमा धेरै रोचक टर्मिनल।
ओप्पो A79 पूर्ण चश्मा प्रकट भयो
ओप्पो ए 79 of को पूर्ण विशिष्टता अनावरण गरियो। नयाँ ओप्पो उपकरणको बारेमा अधिक पत्ता लगाउनुहोस् जुन तपाईंलाई पहिल्यै सबै थाँहा छ।
वनप्लस for को लागि एन्ड्रोइड ओरियोको पहिलो बीटा अब उपलब्ध छ
Android Oreo लाई लामो प्रतीक्षा गरिएको वनप्लस update अपडेट भर्खरै बीटामा जारी गरिएको छ यो स्थापित गर्नमा सबै इच्छुक प्रयोगकर्ताहरूको लागि।
नोकिया of को पहिलो छविहरू फिल्टर गरियो
लीक नोकिया design डिजाइन छविहरू। यस नयाँ नोकिया फोनको बारेमा अधिक पत्ता लगाउनुहोस् जसको हामी पहिले नै एक चुहावटको लागि डिजाइन धन्यवाद जान्दछौं।
सोनी XZ ले Android Oreo प्राप्त गर्न सुरू गर्दछ
सोनी XZ दायरा को लागी अद्यावधिक प्राप्त गर्न को लागी शुरू भएको छ कि यी प्रयोगकर्ताहरु को लागी प्रतीक्षा गर्दै थिए, जो उनीहरुलाई एन्ड्रोइड Oreo का आनंद लिन अनुमति दिन्छ
सामसु Galaxy ग्यालेक्सी S6 ले Android Oreo प्राप्त गर्न सक्दछ
सबै कुराले स Samsung्केत गर्दछ कि सामसुले अनुभवी सैमसंग S6 लाई Android Oreo को नयाँ संस्करणमा अपडेट गर्न काम गरिरहेको छ
गुगल पिक्सेल एक्सएल २ जेरीRigE Everything धीरज परीक्षण, यो पारित गर्नेछ?
Google पिक्सेल XL २ को जेरीRigE प्रत्येक चीज धीरज परीक्षण। गुगलको फोन सबैभन्दा प्रसिद्ध धीरज परीक्षण पार। के हुनेछ?
वनप्लस ले भविष्यका अपडेटहरूमा वनप्लस T टीको अनुहार मान्यता प्राप्त गर्नेछ
वनप्लस users प्रयोगकर्ताका लागि खुशीको खबर यो छ कि वनप्लस T टीको अनुहार पहिचान प्रणाली यसको पूर्ववर्तीमा आउँनेछ
मोटोरोलाले मोटो जेड प्ले र जेड २ प्ले बीच एन्ड्रोइड ओरियो निकाल्न सुरू गर्दछ
मोटो जेड र जेड २ का लागि एन्ड्रोइड ओरेओको पहिलो बिटा ब्राजिलमा पहिले नै उपलब्ध छ, बाँकी देशहरूमा अलि अलि विस्तार गर्न।
यो के होनोर फ्रेम बिना पहिलो मोबाइल V10 जस्तो देखिन्छ
यसको प्रस्तुतीकरणको दुई हप्ता अघि, Weibo मार्फत, अर्को Honor V10 का पहिलो वास्तविक छविहरू चुहावट भयो
ग्यालक्सी S8 र S8 Plus को लागि एन्ड्रोइड Oreo को तेस्रो बीटा अब उपलब्ध छ
सामसु atका केटाहरूले ग्यालेक्सी एस and र ग्यालक्सी एस Plus प्लस टर्मिनलहरूको लागि एन्ड्रोइड ओरेओको तेस्रो बिटा भर्खरै सुरू गरेका छन्
कालो फ्राइडेका लागि शीर्ष पीसी कम्पोनेन्टहरू प्रस्ताव गर्दछ, विशेष श्याओमी!
यहाँ म तपाईंलाई यस शीर्ष प्रस्ताव गर्दछु पीसी कम्पोनेन्ट्स विशेष शाओमी र विशेष ब्ल्याक फ्राइडे २०१ 2017 शाओमी टर्मिनलमा सर्वश्रेष्ठ प्रस्तावहरूको साथ।
टमटपमा यस ब्ल्याक फ्राइडेमा LEAGOO स्मार्टफोनहरूमा छुटहरूको फाइदा लिनुहोस्
टमटपमा कालो फ्राइडे छुट LEAGOO स्मार्टफोनहरूमा। ब्रान्ड उपकरणहरूमा हाम्रो प्रतीक्षामा छुटमा नछुटाउनुहोस्।
सामसुले ग्यालक्सी नोट Star स्टार वार्स संस्करण सुरू गर्न सक्दछ
भर्खरको चुहावटले चेतावनी दिन्छ कि सामसुले ग्यालक्सी नोट of को स्टार वार्स संस्करण सुरू गर्न लाग्न सक्छ, हामी यहाँ तपाईंलाई थप विवरणहरू बताउँदछौं।
सामसु'sको ग्यालक्सी जे दायराले २०१ rear को लागि दुई रियर क्यामेरा अपनाउनेछ
नयाँ ग्यालेक्सी जे जुन अर्को बजारमा आउँदछ अन्तमा डबल रियर क्यामेरा लागू गर्न सक्दछ।
Xiaomi Mi A1 बजारमा सबै भन्दा राम्रो मूल्यमा किन्नुहोस्
अर्को म तपाईंलाई Xiaomi Mi A1 एक अपराजेय मूल्यमा, न्यूनतम मूल्यमा र पूरा ग्यारेन्टीको साथ किन्नको लागि बजारमा उत्तम प्रस्ताव ल्याउँछु।
Tizen 3.0 सामसु G गियर S3 मा आइपुग्न सुरू गर्दछ
सामसु .ले भर्खरै स्यामसंग गियर S3 को लागि आफ्नो अपरेटिंग प्रणालीमा नयाँ अपडेट ल्याउन सुरू गर्यो।
हामी स्पेनमा आधिकारिक BLU क्याटलग जान्दछौं
हामीलाई पहिले नै स्मार्टफोनको क्याटलग थाहा छ जुन BLU ले स्पेनमा प्रस्ताव गर्नेछ। ती सबैको केहि चीज समान छ; डिजाइन, प्रदर्शन र राम्रो मूल्य। कसले अधिक दिन्छ?
अनप्लस T टी सबैभन्दा प्रख्यात धीरज जाँचमा पर्छ, के यसले यसलाई पास गर्नेछ?
अनप्लस T टी सबैभन्दा प्रख्यात धीरज जाँचमा पर्छ, के यसले यसलाई पास गर्नेछ? वनप्लस T टी अन्तर्गत धीरजको परीक्षणको बारेमा बढि पत्ता लगाउनुहोस्।
ग्यालक्सी एस of को आधिकारिक प्रस्तुती हुनुभन्दा तीन महिना अघि ग्यालक्सीको नयाँ फ्ल्यागशिप गीकबेन्चमा पुगेको छ।
सामसु Galaxy ग्यालेक्सी J5 प्राइम २०१ 2017 र J2 प्रो २०१ 2018 का विवरणहरू फिल्टर गरिएका छन्
J नयाँ श्रृंखलामा समाहित हुने दुई नयाँ सामसु ter टर्मिनलहरूका विनिर्देशहरू फिल्टर गरिएका छन्: तिनीहरू ग्यालेक्सी J5 प्राइम २०१ 2017 र J2 प्रो २०१ 2018 हुन्।
Honor V10 का स्पेसिफिकेसनहरू पहिले नै ज्ञात छ
Honor V10 का स्पेसिफिकेसनहरू पहिले नै ज्ञात छ। ब्रान्डको नयाँ फोनको बारेमा अधिक खोज्नुहोस् जुन डिसेम्बर on मा प्रस्तुत हुनेछ।
ब्ल्याकबेरी मोशनको मूल्य यसको सबैभन्दा ठूलो प्रतिस्पर्धी हुन सक्छ
ब्ल्याकबेरी आफ्नो नयाँ "मोशन" मोडेलको साथ बजारमा फिर्ता आउनेछ, एक सुसज्जित स्मार्टफोन जसले बेरोजगार मूल्यको साथ सुरू गर्नेछ।
Huawei P11 Plus को पहिलो चित्रहरु फिल्टर गरीएको छ
यसको प्रस्तुतीकरणको केही महिना अघि नै Huawei P11 Plus को पहिलो छविहरू चिनियाँ सामाजिक नेटवर्क Weibo मा भर्खरै आएको छ।
यी Honor 6A Pro का स्पेसिफिकेसनहरू हुन् जुन युरोपमा पहिल्यै आइसकेको छ
Honor 6A Pro: नयाँ कम-अन्त पहिले नै इटालीमा उपलब्ध छ। नयाँ Honor फोनको बारेमा बढि फेला पार्नुहोस् जुन यूरोपियन बजारमा पहिले नै छ।
समीक्षा नोकिया Review
यहाँ म तपाईंलाई नोकिया the को प्रतिज्ञा गरिएको समीक्षा छोड्दछु, टर्मिनल जुन यसको मूल्य अनुसार समान मूल्य दायराको अन्य टर्मिनलहरू भन्दा तल छ।
नयाँ Oukitel K5, १:: scre स्क्रीनहरूको ट्रेंड अनुसरण गर्दछ
Oukitel बाट अर्को प्रक्षेपण K5 मोडेल हो, एक विशाल टर्मिनल १ 5,7.: format ढाँचामा विशाल 18 इन्च स्क्रीन।
यूट्यूब १२..12.44 now ले अब स्क्रीनमा पिन्चि allowsलाई भिडियो १ 18: scre स्क्रीनमा फिट गर्न अनुमति दिन्छ
YouTube अनुप्रयोगमा अर्को अपडेटले १ 18: scre स्क्रीनहरूको लागि समर्थन प्रस्ताव गर्दछ जब स्क्रिनमा पिन्च गर्दै
यदि तपाईं नयाँ वनप्लस T टीका वालपेपरहरू डाउनलोड गर्न चाहनुहुन्छ भने, यस लेखमा हामी तपाईंलाई लिंकहरू 5k रिजोलुसनमा डाउनलोड गर्न छोडछौं।
वनप्लस T टी अब आधिकारिक छ: सबै विवरणहरू जान्नुहोस्
वनप्लस T टीका बारे थप जान्नुहोस् जुन आधिकारिक अनावरण भइसकेको छ। हामीलाई पहिले नै यसको पूर्ण विवरणहरू, मूल्य र उपलब्धता थाहा छ।
शाओमी रेडमी and र Plus प्लस नोभेम्बरको अन्तिम दिनहरूमा आउने छन्
शाओमी रेडमी and र रेडमी Plus प्लस नोभेम्बरको अन्त्यसम्म आइपुग्छन् र एशियाली कम्पनीको मध्य / कम दायराको हिस्सा बन्नेछन्।
टमटपमा ब्ल्याक फ्राइडेका लागि स्मार्टफोनहरू र आर सी ड्रोनमा उत्तम सम्झौताहरू
टमटपमा ब्ल्याकफ्रीडेका लागि स्मार्टफोनहरू र आर सी ड्रोनमा उत्तम सम्झौताहरू। टमटपमा ब्ल्याक फ्राइडा पदोन्नतिहरूको बारेमा थप फेला पार्नुहोस्।
Doogee एक लचिलो स्क्रीन संग एक स्मार्टफोन मा काम गरिरहेको छ
चिनियाँ निर्माता डुजी एक लचिलो स्क्रिनको साथ स्मार्टफोन विकास गर्दैछ जुन अर्को वर्षको उज्यालो देख्न सक्दछ
यस पदोन्नतिको फाइदा लिनुहोस् र लिगू T5c मात्र $ १.1,99 मा पाउनुहोस्
लीगू टी c सीको आउँदो सुरूवात मनाउन, लिगूमा केटाहरूले purcha १.5 को मूल्यमा पाँच खरीदहरू भ्यागुताउँदै छन्।
यो नयाँ शाओमी मी मिक्स be हुन सक्छ
नयाँ जिओआई एमआई मिक्स २ एस का पहिलो छविहरू के हुन सक्छ, टर्मिनल जसले फ्रन्ट क्यामेराको स्थिति परिवर्तन गर्दछ, भर्खर फिल्टर गरिएको छ
सामसु Galaxy ग्यालेक्सी S8 माइक्रोसफ्ट संस्करण अब उपलब्ध छ
सामसु Galaxy ग्यालेक्सी S8 माइक्रोसफ्ट संस्करण अब उपलब्ध छ। सामसु'sको उच्च-अन्तको यो नयाँ संस्करण अब उपलब्ध छ।
शाओमीले सियोमी मी ए 1 को संस्करण २०० युरो भन्दा तल ल्याउने छ
चिनियाँ फर्म शाओमी, जुन भर्खर आधिकारिक रूपमा स्पेनमा अवतरित भएको छ, चाँडै A A जीबी भण्डारणको साथ १ 1 32 यूरोमा मी ए १ को मोडल ल्याउने छ।
मिडियाटेकले घोषणा गर्‍यो कि यसले मध्य दायरा र तल्लो-मध्य दायरामा केन्द्रित हुनेछ
क्वालकॉम मिडियाटेकको घोषणा पछि भर्खर घोषणा भयो कि यसले मध्य र तल्लो दायरामा ध्यान दिन उच्च-प्रोसेसरहरूमा लगानी रोक्दछ।
अन्तिम समस्या जसले पिक्सल २ एक्सएललाई प्रभाव पार्छ स्क्रिनको किनारहरूलाई असर गर्दछ
व्यावहारिक रूपमा अक्टुबरको सुरूमा यसको प्रस्तुतीकरणदेखि, गुगल पिक्सेल २ एक्सएलले आलोचना प्राप्त गर्दै छ र समस्याहरू प्रस्तुत गर्दै ...
वनप्लस T टीको आधिकारिक प्रस्तुती भन्दा days दिन अगाडि टर्मिनलको पहिलो वास्तविक छविहरू मात्र फिल्टर गरिएको छ।
सामसुले ग्यालक्सी एस:: एक्सीनोस99810 १० को सम्भावित प्रोसेसर घोषणा गर्‍यो
सामसु्ग पहिले नै यसको अर्को प्रोसेसरमा काम गरिरहेको छ। यो Exynos 9810, एक शक्तिशाली प्रोसेसर छ जुन हामी सामसु Galaxy ग्यालक्सी S9 मा देख्न सक्छौं।
मोटोरोलाले एक बर्ष पहिले भन्दा धेरै उपकरणहरू बेच्छ
मोटोरोला, अब लेनोभोको हातमा छ, अन्तिम क्वाटरमा डबल समयमा बेचेको उपकरणहरूको संख्या देखेको छ।
११.११ प्रस्तावहरूको फाइदा लिनुहोस् लाईट इन बक्समा
११.११ को उत्कृष्ट प्रस्तावहरू लाईट इन बक्समा पत्ता लगाउनुहोस्। यस दिन लाइट इन बक्समा उपलब्ध अफरहरू नछुटाउनुहोस्।
सामसुले २०१3को लागि नयाँ ग्यालक्सी जे prepared तैयार गरेको छ
सामसुले प्रसिद्ध ग्यालेक्सी जे rene को नवीकरण गर्नेछ, दक्षिण कोरियाली कम्पनीको एक सर्वाधिक बेच्ने उपकरणहरू मध्ये। हामी तपाईंलाई भन्नेछौं!
NichePhone-S: एन्ड्रोइड मोबाइल क्रेडिट कार्डको आकार
जापानी कम्पनी, फ्यूचरमोडलले हामीलाई निचफोन-एस, स्मार्टफोनको योग्य सुविधाहरू भएको कार्ड जत्तिकै सानो टर्मिनलमा ल्याएको छ।
एसएम- W2018 को नयाँ छविहरू, सामसु'sको अर्को फोल्डिंग फोन चुहावट भयो
सामसुले चिनियाँ बजारमा फोल्डिंग फोनहरूमा शर्त लगाउन जारी राखेको छ, आउँदै गरेको उपकरणको तस्बिर आज चुहावट भयो
Huawei En718S: अर्को टर्मिनल १ screen: screen स्क्रीन र डुअल क्यामेराको साथ
हुवावेले १ for: screen स्क्रिनको साथ लगभग बेजेल र डबल क्यामेराको साथ नयाँ टर्मिनल तयार गरेको छ। यो Huawei मजा 18S छ। के तपाईं उसलाई अझै चिन्नुहुन्छ?
टमटपमा उपलब्ध ११.११ छुटहरू नछुटाउनुहोस्
उत्कृष्ट ११.११ छूटहरू टमटपमा उपलब्ध छन्। लोकप्रिय स्टोर मा यी विशेष छुट छुट नगर्नुहोस्।
सामसु Galaxy ग्यालेक्सी S225 मा Yoigo साथ २२8 यूरो बचत गर्नुहोस्
यो उत्कृष्ट सामसु Galaxy ग्यालेक्सी S8 प्राप्त गर्न आउँदा Yoigo हामीलाई एक महत्वपूर्ण छुट प्रदान गर्दछ
Ek चीनमा एकल दिवस ११.११ मनाउन गीकबुइ Onमा Ir अपर्याप्त प्रस्तावहरू
यहाँ गीकबुइ onमा ११/११ वा चीनमा एकल दिवस मनाउनका लागि ir अप्रत्याशित प्रस्तावहरू छन्, offers प्रस्तावहरू जुन तपाईंले मिस गर्न सक्नुहुन्न।
Xiaomi Mi A1 समीक्षा
Xiaomi Mi A1 को गहन भिडियो समीक्षा, टर्मिनल जुन एक अतुलनीय मूल्यमा Android मध्य-दायरा शासन गर्न आउँदछ।
HTC ओशियन हार्मोनीको लीक स्पेसिफिकेशन
HTC महासागर तालमेल: विशिष्टताहरु प्रकट भयो। २०१ new मा नयाँ HTC फोन मार्केटमा हिट गर्ने बारे थप जान्नुहोस्।
केवल $ १। For मा नै शानदार Doogee मिक्स २ प्राप्त गर्नुहोस्
११ मध्ये ११ को पुलको फाइदा लिन डुजीका केटाहरूले एउटा अविश्वसनीय अफर सुरु गरे जुन हामीलाई MIX २ को साथ १ 11 11 डलरमा पाउछ।
११-११ प्रस्तावहरूको फाइदा लिनुहोस् र तपाईंको लिगू पूर्ण रूपमा नि: शुल्क पाउनुहोस्
नोभेम्बर ११ मा, लीगूले ती मितिमा तिनीहरूका कुनै पनि मोडेलहरू खरीद गर्ने प्रयोगकर्ताहरूको बीच free नि: शुल्क खरीदहरू राफल गर्नेछन्।
सामसु्गले एकपटक फेरि एप्पललाई उसको विज्ञापनमा ठट्टामा उडायो